Article comportant le tag #DAHALO
Norarafan'ny dahalo tifitra variraraka ity taxi-brousse
Publiée le 28 août 2017 par kamisy
Diam-bala efa ho sivy no naha-trobaka an'ity taxi-brousse Sprinter mampitohy an'i Fianarantsoa sy Antananarivo ity.
Voalaza fa niala avy aty Antananarivo izy ity ka nony efa hiditra an'i Fianarantsoa, tanàna iray atao ho Iboaka no nitrangan'ny loza... Lire la suite
FANAFIHANA TAXI-BROUSSE DAHALO
Fanafihana mitam-piadiana : Ramatoa mpamatsy « kalach » ireo jiolahy, voasambotra
Publiée le 25 juillet 2017 par insec
Suivez les actualitÃ©s Ã Madagascar avec le premier quotidien national d'information en langue franÃ§aise de la Grande Ãle.
Ny RAD no manofana ny ankizy ho dahalo tao Anjiro
Publiée le 21 juillet 2017 par ndam
Anjiro : Ankizy nofanin’ny ray aman-dreniny ho dahalo
Fanafihan-jiolahy tao amin'ny Kaominina Tritriva-Betafo
Publiée le 03 juillet 2017 par rasamy
Nisioka sifflet ny dahalo no niditra tamin'ny tanàna iray tao amin'ny kaominina Tritriva-Betafo ny sabotsy alina tokony ho tamin'ny folo ora sy sasany.
Raikitra ny fifanjevoana ka tsy nobahanan'ny dahalo tsy hivoaka ny trano ny iray tanàna nefa le... Lire la suite
Ben'ny Tanàna Ambalakindresy notifirina sy notsatohana antsy
Publiée le 06 juin 2017 par ambala
Ben'ny tanàna ao Ambalakindresy maty voatifitra ary notsatotsatohana antsy, ary tsy izy irery no maty tamin'izany fa nisy lehilahy iray koa niaraka maty taminy.
Tsy fantatra mazava ny anton'ny nahatonga izao fahafatesana izao fa raha ny vaovao azo ... Lire la suite
AMBALAKINDRESY AMBOHIMAHASOA DAHALO
Asan-dahalo any Betroka
Publiée le 12 mai 2017 par reepicheep
Ady tsy mety ho tapitra mihitsy ity asan-dahalo ao atsimo ao ity. Raikitra indray ny fifandonana teo amin'ny zandary miaraka amin'ny fokonolona sy ireo dahalo tany Betroka. Tsy mifampitsitsy mihitsy anefa izay mahatratra na ny tompon'ny Omby na ireo ... Lire la suite